Nanomboka Tao India Ny Fihaonamben’ny Wikimedia Azia Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Aogositra 2016 7:50 GMT
Ny toeran'ny fihaonamben'ny Wiki India 2016. Sary avy amin'i Ravishankar Ayyakkannu‎. Zon'ny mpamorona, lisansa CC
Nanomboka tamin'ny 5 Aogositra tao Landran, fanjakana Indiana ao Punjab ny Fihaonamben'ny Wiki India 2016, fihaonana goavana indrindra iarahan'ireo mpandray anjara ao amin'ny Wikipedia (Rakipahalalana antserasera ahitana fiteny maro) sy ny tetikasa miaraka aminy antsoina hoe tetikasa Wikimedia.
Niverina ny fihaonambe dimy taona taorian'ny fiaingany voalohany tamin'ny 2011. Nifantoka tamin'ny fitondrana miaraka ireo fiarahamonina mpandray anjara ao Azia Atsimo sy ny tetikasa Wikimedia amin'ny teny Anglisy avy amin'ny zana-kaontinanta Indiana ny hetsika tamin'ity taona ity.
Hihaona ao amin'ny fari-pianarana ambony an'ny Vondrona Kolejin'ny Chandigarh, toerana hanaovana ny fihaonambe ireo mpandray anjara an-jatony vitsy ka anisan'izany ireo 100 nahazo vatsy avy ao India, Pakistan, Nepal, Bangladesh sy Sri Lanka. Nanomana andiana fampahafantarana, lahavolana sy atrikasa mikasika ireo lohahevitra lehibe tahaka ny fitongilanana eo amin'ny lahy sy ny vavy ao amin'ny Wikipedia, ny teknolojia, ny fanatrarana izao tontolo izao, ny fanabeazana, ny fananganana fitarihana an-tsitrapo sy ny firotsahana ary ny famolavolana fandravahana – mba hifanakalo hevitra amin'ireo mpandray anjara mandritra ny telo andro.
Ho an'ny fotoam-pivoriana ara-teknika mitokana, nisy ny fanangonana tombana notontosaina talohan'ny fotoana indrindra mba hanangonana hevitra amin'ny olana ara-teknika atrehin'ireo mpandray anjara an-tsitrapo. Ao anatin'ny asa ny hackathon mba hamahana ny sasany amin'ireo olana lehibe ara-teknika any amin'ny fikambanan'ny teny isan-karazany.
Lanonana fanokafana ny @WikiConIndia!
Eo am-pananganana votoaty nahazo lisansa malalaka ao amin'ny teny Indiana ao amin'ny aterineto ny fiarahamonina Wikimedia ao Azia Atsimo manontolo sy ny fikambanana Wikipedia, izay samy miankina amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo. Azo jerena amin'ny teny 293 ny Wikipedia amin'izao fotoana izao. Hanampy tetikasa an-jatony vitsy amin'ny lisitra ny tetikasa Wikimedia hafa—Wikisource, tranomboky maimaim-poana; Wiktionary, rakibolana antserasera amin'ny fiteny maro; sy ny Wikimedia Commons, sehatry ny media goavana indrindra manerantany mampiantrano ireo sary, raki-peo, lahatsary sy tahiry media hafa an-jato sy an'arivony.
Ry zalahy Orina Mpanasoa Wikimedia miaka-tsehatra mankafy ny kolontsaina ao #Punjab sy manisy marika ny tongotr'izy ireo.
Vahiny voamarika nanao lahateny teo amin'ny fivoriana i Nataliia Tymkiv mpikambana ao amin'ny birao mpitantan'ny Orina Mpanasoa Wikimedia, Katherine Maher Tale mpanatanteraka vao voatendry ao amin'ny fikambanana, Surjit Patar poeta amin'ny teny Punjabi, ary i Sunil Abraham ilay mpiaro ny fahalalahan'ny aterineto sady Tale mpanantateraka ao amin'ny Foiben'ny Aterineto sy ny Fiarahamonina.
Maka ny fon'ny tsirairay ao amin'ny #WCI2016 amin'ny fanononana ny tononkalony ilay poeta Punjabi Dr Surjeet Patar
Misy ny hazakazaka fanitsiana votoaty tsy mitsahatra ny Wikipedia tontosaina mandritra ny iray volana eo ho eo mialoha ny fihaonambe amin'ireo Wikipedias teny Indiana miisa 12 sy ny Wikipedia iray amin'ny fiteny Eoropeana miisa iray (Wikipedia Okrainiana). Ny fiteny manjaka amin'io edit-a-thon [hazakazaka fanitsiana] io dia ny Bengali, Hindi, Gujarati, Kannada, Konkani, Malayalam, Odia, Punjabi, Tamil sy Telugu. Ny ifantohan'izany dia ny hanabeazam-boho ny votoatin'ny Wikipedia momba an'i Punjab, ny vahoaka Punjabi, ny fiteny sy ny kolontsain'izy ireo ho fihetsika hanehoana fankasitrahana an'i Punjab, toerana hanaovana ny hetsika. Hanampy ireo mpamaky Wikipedia marobe isan-toerana hahafantarana an'i Punjab sy ny fiteniny manokana ireo lahatsoratra momba an'i Punjab na ny vahoaka Punjab amin'ny fiteny hafa ao an-toerana. Hatreto, maherin'ny 1.900 ireo lahatsoratra noforonin'ireo Wikipediana 100 eo ho eo. Hotontosaina mandritra ny fihaonambe ihany koa ny hazakazaka fanitsiana mba hahafahan'ireo mpanatrika mandray anjara amin'ity hetsika ity.
Ny teny Konkani no fiteny ofisialy ao amin'ny fanjakana Indiana ao Goa ary ampiasaina manamorona ny morontsiraka andrefan'i India. Tao anatin'ny antsafa, nanazava ny fomba ahafahan'ny Wikipedia mampiray ireo iray fiteny miresaka amin'ny tenim-paritra mifankahazo resaka fa manoratra amin'ny endri-tsoratra samihafa ny The Discoverer, mpandray anjara mavitrika ao amin'ny Wikipedia amin'ny teny Konkani:
Mba hahombiazan'ny Wikipedia Konkani, tsy vitany hoe “hevitra tsara ‘ho an'ireo mpiteny Konkani manoratra amin'ny endri-tsoratra samihafa ny miara-miasa amin'ny Wikipedia iray, fa tsy maintsy atao ihany koa sady fanamby izany. Tsy maintsy atao izany, satria tsy misy vondrom-piarahamonina mahavita irery amin'ny fampandehanana ny Wikipedia. Tena sarotra izany satria tsy ny rehetra no afaka mamaky ny soratra tsirairay, ary zava-dehibe ho an'ny mpiseran'ny Wikipedia rehetra ny mahavita mahatakatra ny votoaty rehetra ao amin'izany habaka izany.
Ato ny antsafa feno.
Miara-miasa mba hampahomby ity hetsika ity ny ekipa ahitana ireo mpikarakara nanolo-tena izay mpirotsaka an-tsitrapo voalohany indrindra ary misolo tena ireo fiarahamonina Wikimedia marobe avy any India sy ny sampan'ny Wikimedia miisa telo: Wikimedia India, Wikimediana Punjabi ary ny fandaharan'asa Fahazoana Fahalalana ao amin'ny Foiben'ny Aterineto sy ny Fiarahamonina.
Azo jerena ao amin'ny pejin'ny hetsika, sy ny Facebook ary ny Twitter ny antsipirian'ny hetsika.
Subhashish Panigrahi no tompon'andraikitry ny fandaharana ao amin'ny fandaharana Fahazoana Fahalalana ao amin'ny Foiben'ny Aterineto sy ny Fiarahamonina (CIS-A2K). Ny CIS-A2K dia iray amin'ireo mpiara-miasa ao amin'ny Fihaonambe Wiki India 2016.